ဘီလူး သုံးမြွှာပူး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဘီလူး သုံးမြွှာပူး
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Jul 22, 2011 in Creative Writing | 34 comments
၎င်းချဉ်ခြင်းများမှာ အသားများကို အစိမ်းလိုက် စားလိုခြင်း၊ သွေးတို့ကို သောက်လိုခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံ ကိုအောင်မော်အား တရှုပ်ရှုပ် နမ်းရင်း ကိုအောင်မော်အား –
” အောင်မော် နင့်အသားတွေက မွှေးနေတာပဲ။ ငါ စားချင်လိုက်တာဟာ “
-ဟူ၍ ပြောတတ်လေသည်။ ထိုအခါမျိုး၌ကား ကိုအောင်မော်မှာမူ မျက်လုံးပြူး ၊ မျက်ဆံပြူး ဖြစ်သွားကာ “ဟာ … နင်ကလည်း” ဟူ၍ ပြောပြီး မခင်ကြည်၏ ဘေးမှ ကမန်းကတန်း ထွက်သွားရတတ်၏။
ထိုကဲ့သို့ ထူးခြားနေသော မခင်ကြည်၏ ချဉ်ခြင်းများအား ကိုအောင်မော်မှာ ရွာထဲရှိ ခေါင်းသုံးလုံး ပညာရှိများထံသို့ လည်းကောင်း၊ လူကြီးသူမများ ထံသို့လည်းကောင်း သွားရောက် ပြောပြရလေသည်။ မပြောလို့လည်း မဖြစ်။ ၎င်း၏ အသားကိုပင် စားချင်လောက်သော ချဉ်ခြင်းကို ကိုအောင်မော်တစ်ယောက် လန့်နေရသည် မဟုတ်ပါလော။
ထိုချဉ်ခြင်းအား ကြားသိရချိန်မှစ၍ ကိုအောင်မော်မှာ မခင်ကြည်နှင့် မအိပ်ရဲတော့ပေ။
မခင်ကြည်အား မီးဖွားပေးသော လက်သည် အဒေါ်ကြီး လန့်ဖြတ် အော်လိုက်မိသည်။ ထိုအော်သံကြောင့် မီးဖွားရာအခန်း၏ ရှေ့တွင် မိမိ၏ မိန်းမ မခင်ကြည် လွယ်လင့်တကူ မီးဖွားနိုင်စေရန်အတွက် အင်္ဂုလိမာလသုတ်ကို လည်းကောင်း၊ လူကြီးသူမများ ပြောသကဲ့သို့ ဘီလူး မွေးဖွားမလာစေရန် လည်းကောင်း ဆုတောင်း ရွတ်ဆိုနေသည့် ကိုအောင်မော်မှာလည်း စိုးရိမ်မှုနှင့်အတူ လန့်သွားလေသည်။
” ဘာမှ … ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး အောင်မော်၊ ခဏနေရင် မင်းလည်း ဝင်ကြည့်လို့ ရပြီပဲ”
ဟူ၍ မီးဖွားခန်းထဲမှ ဒေါ်တင်က ကိုအောင်မော်အား လှမ်းပြောလိုက်လေသည်။ ကိုအောင်မော်မှာ ဒေါ်တင်၏ စကားထစ်သွားပုံကို ထောက်ဆ၍ မခင်ကြည်မှာ အမှန်ပင် ဘီလူးလေးကို မွေးဖွားလိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း နားလည်လိုက်သည်။ သို့ရာတွင် ကိုအောင်မော်မှာ မိမိ၏ မူရင်းစိတ်မှ လက်ခံ နားလည်လိုက်သည့် အကြောင်းအရာအား ဖုံးကွယ်ပစ်ရန်အတွက် မျက်စိကို စုံမှိတ်၍ လက်အုပ်ချီကာ
” မဟုတ်ပါစေနဲ့ ..၊ မဟုတ်ပါစေနဲ့ ..၊ သမ္ဗုဒ္ဓေ x x x ၊ ဣတိပိတော x x x …”
စသည်ဖြင့် တသွင်သွင် ရွတ်ဆိုနေတော့သည်။
ဒေါ်တင်၏ မျက်နှာမှာ မကောင်းပေ။ ကိုအောင်မော်မှာ တံခါးသဖွယ် ပိတ်ကာထားသည့် ခန်းစီးစကို ကိုင်၍ အတန်ငယ် တွန့်ဆုတ်နေလေသည်။ ယခင် သားကြီး ကောင်းကျော် အား မွေးဖွားခဲ့စဉ်က လက်သည် အဒေါ်ကြီး ဒေါ်ဒေါ်တင်၏ မီးဖွားခန်းမှ အထွက်ကိုပင် မစောင့်။ ဒေါ်တင်မှ ” အောင်မော်ရေ ၊ ဝင်လာလို့ရပြီ “ ဟု ဆိုကာမှရှိသေး။ ကိုအောင်မော်မှာ အခန်းတွင်းသို့ ရောက်ရှိနေပေပြီ။ ယခုမူ မိမိ မမြင်တွေ့ချင်သည့် မြင်ကွင်းအား မြင်တွေ့ရမည်ကို သိနေသည့်အတွက် အတန်ငယ် တွန့်ဆုတ်နေခြင်း ဖြစ်သော်လည်း ” အို … ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါဟာ ငါ့ရဲ့ရင်သွေးပဲ “ ဟူသော ဖခင်စိတ်ကို ဖြစ်စေပြီး ခန်းစီးစကို မတင်ကာ အခန်းတွင်းသို့ ဝင်သွားလေသည်။
” အို … ငါက ဘာကိုကြောက်နေရမှာလဲ၊ ဒါ ငါ့ရဲ့ကလေးတွေပဲ”
ဟူ၍ စိတ်တွင်းမှ ရေရွတ်ရင်း ကလေးများကို ဖုံးလွှမ်းထားသည့် စောင်အား အသာအယာ ဆွဲဖယ်ကြည့်လိုက်လေသည်။ ထိုအချိန်၌ မခင်ကြည်မှာမူ မျက်စိကို အသာပိတ်၍ သက်ပြင်းကို အသာချလိုက်လေတော့သည်။
” အင်း “
များသောအားဖြင့် ရွာ၏ အမှိုက်သရိုက်များကို စွန့်ပစ်ရာ နေရာ ဖြစ်လေသည်။ ထိုကျီးအာရိုး၏ မလှမ်းမကမ်းတွင် လူတစ်စု တလှုပ်လှုပ် တရွရွဖြင့် ရှိသည်ကို တွေ့ရလေသည်။ ၎င်းလူစုထဲမှ တစ်စုံတစ်ယောက်သော လူတစ်ယောက်သည် ဓားကြီးတစ်လက်အား ကိုင်ဆောင်ထားသည်။
၎င်း၏ ရှေ့၌ မွေးဖွားစ ကလေးငယ် နီတာရဲလေး သုံးယောက်ကို ပက်လက် အနေအထားဖြင့် တွေ့ရလေသည်။
ကိုဖိုးထောင်သည် ၎င်း၏ ဓားကြီးအား ဘီလူးလေးများကို ခုတ်ပိုင်းရန် အသင့်ပြင်လိုက်သည်။ သနားကြင်နာမှု မရှိ၊ ကြောက်ရွံ့ခြင်း မရှိသည့် နွားသတ်သမား ကိုဖိုးထောင် အတွက်မူ ယခုကိစ္စသည် ထမင်းစား ရေသောက် ဖြစ်နေသော်လည်း ပိုင်းပြတ်သွားမည့် ဘီလူးလေးများ၏ ခြေပိုင်းမှ ဆွဲရမည့် လူများမှာ ချွန်သည့် သဏ္ဍာန်ရှိသော ခြေသည်းရှည်ကြီး များကို ကြည့်၍ အနည်းငယ် ရွံ့နေဟန် ရှိလေသည်။ ထို့ထက် ဘီလူးလေးများ၏ ခေါင်းပိုင်းကို ယူရမည့် လူများမှာ နီကြောင်ကြောင် မျက်လုံးကြီး များနှင့် လက်သည်း ရှည်ကြီးများကို ကြည့်ကာ ပို၍ ရွံ့နေဟန် ရှိကြသည်။ အနှီ ဘီလူးပေါက်စလေးများမှာ မူကား ၎င်းတို့အား သတ်ဖြတ် ခံရခြင်းထက် ဆာလောင် မွတ်သိပ်သည့် အသံများဖြင့် ” အူဝဲ “ ဟူသော မွေးဖွားစ ကလေးငယ်တို့၏ အစွမ်းထက် ဂါထာ မန္တာန်ကိုသာ တွင်တွင်ကြီး ရွတ်ဆိုနေတော့သည်။
ထပ်မံတွေ့မိသည့် နေရာများ –
Love Shade (Credit တောင် ဖြုတ်ပြီး လုပ်စားထားသည်)
Solakoko (ပေါက်ဖော်ကြီးရဲ့ အရင်ကနေရာတစ်ခုပေါ့ဗျာ)
တစ်ခါမှကိုယ်တွေမကြုံဘူးဖူး …နည်နည်ရှားမယ် ဒီအဖြစ်မျိုးက။။။။
သူတို့အားလုံး ပြန်ရှင်ပါတယ် တစ်ယောက်က ဒီရွာထဲမှာရှိပါတယ်
အမှန်ကတော့.. မွေးလာတဲ့ကလေးတွေကို ဘာအကြောင်းပြချက်နဲ့မှ သတ်ခွင့်မရှိဘူး..။
ရက်ရက်စက်စက်ခုတ်သတ်တာမျိုးဆိုရင်.. လုံးဝ(လုံးဝ)ကို မဖြစ်သင့်ဘူး..။
အဲဒီစာထဲက ဘီလူးမျိုးတကယ်ရှိရင်.. တယောက်ကို ..ဒေါ်လာ၁သန်း အသာလေးရတယ်..။
ရောင်းစားဖို့ပြောတာမဟုတ်ဖူး..။ မိဘအစောင့်အရှောက်နဲ့.. ယူအက်စ်ကို.. လာယုံပဲ..။
ယူအက်စ်အစိုးရက..တာဝန်ယူပြီး.. လူသားတွေအကျိုးရှိဖို့..ဆေးပညာ..မျိုးရိုးဗီဇ..စသဖြင့် စမ်းသပ်ကြမှာပဲ..။
စမ်းသပ်ခန်းထဲက.. တိရိစ္ဆာန်တွေလို လုပ်မှာလည်းမဟုတ်ဘူး.။ လူသားအခွင့်အရေးအပြည့်ပေးပြီး လုပ်ကြမှာ..။
တကမ္ဘာလုံးက သတင်းဌာနတွေ.. တိုးရစ်တွေနဲ့..စည်ကားနေမှာမို့ ပါ…။
ဒို့ သဂျီးက အမြဲတမ်း မီလီလျှံ ဘီးဇစ်နက် အကွက်မြင်တယ်။
အိမ်တိုင် ချွတ်ရောင်းခါနီးပြီ ဆိုပြီး ငြီးနေတာက လွဲရင်.. ဟဟ..
ဂမ္ဘီရဆိုတာတွေက.. တကယ်မရှိဘူးရယ်လို့တော့မဟုတ်.. အတုအယောင်က.. ၉၉.၉၉% လောက်ဖြစ်နေပုံရတော့ကာ.. ဒို့ရွာသားတွေ စစ်ဆေးရဲအောင်.. လက်တွေ့ကျကျသမားတွေဖြစ်လာအောင်.. မြှောက်ပေးနေတယ်ပဲဆိုပါစို့..။
ဒါပေမဲ့.. တကယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်.. သူကြီးအနေနဲ့က… လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ .. လက်လှမ်းတော့မှီပါတယ်နော..။
(ရက်စက်တာတော့ မဟုတ်ဘူးနော်။ သေချာအောင်လို့)
instead of burning them into ashes, why didn’t they made it into BBQ and meals.
တကယ်ရှိခဲ တာလားတခါမှဒါမျိုးမကြားဖူးပါ အလွန်ဆန်းကြယ်လှပေသည် ဖြစ်နိုင်ပါသလား သိသူများဖြေကြားပေးကြပါ
တစ်ကယ် ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ပြောရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့်ရဲ့ ဇာတိရွာမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက် တစ်ခုပါပဲ။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် (20) က ဖြစ်ခဲ့တဲ့ တကယ့် အဖြစ်အပျက်လား
တကယ့် အဖြစ်အပျက်ဆိုရင်တော့ တော်တော်လေး ထူးဆန်းတာပဲ
ဒါမျိုးနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်တူတာမျိုးတော့ အရင်က လူကြီးတွေရဲ့ ပါးစပ် ရာဇင်ထဲမှာ ကြားဖူးတယ် ။
မကြုံဖူးလို့လား မသိဘူး … ဘီလူးမွေးတယ် ၊ ဓါးနဲ့ ခုတ်တာတောင် ပြန်ဆက်သွားတယ်ဆိုတာ ယုံကို မယုံနိုင်ဘူး ။
ချီးစားပြောတောင် မယုံဘူး။ Ogre ဘီလူးကြီး လက်မှာ ဓါးရှတာလေးတောင် တော်တော်နဲ့မပျောက်ဘူး။
ပြီးသွားတာ လား ပို.စ် က ဖတ်လို.ကောင်းနေတုန်းရှိသေးတယ်…
တခါတလေတော့လဲ ဒီလို စာမျိုးက ဖတ်ရတာ ကောင်းသလို
ဘာပြောပြော စာရေးကောင်းတာကို လေးစားပါတယ်.
ဘီလူးတစ်ကောင်တော့ ရွာထဲမှာ ပြန်တွေ့ ပြီလို့ 
ဘာလုပ်သင့်သလဲဆိုတာတော့..သဂျီးတို့ နဲ့ တိုင်ပင်ပါဦးလို့ ….
ဗဟုသုတနည်းသေးတဲ့အချိန်ကဖြစ်ရပ်ပါ 21ရာစုမှာတော့မျိုးရိုးဗီဇဖေါက်ပြန်ပြီးမွေးတဲ့ခလေးတွေမှန်း သိတဲ့လူများနေပါပြီ….
အဲသည်လို မျိုဗီဇ ချွတ်ယွင်းဖေါက်ပြန်တဲ့ ကလေးမျိုး မွေးတော့မယ့် မိခင်လောင်းများမှာ စိတ်ကယောင်ကတမ်းဖြစ်တာ၊ စိတ်ထားပြောင်းလဲတာ၊ အိပ်မက်ဆိုး အိပ်မက်ဆန်းများမက်တာ၊ ထူးဆန်းတဲ့ချင်ခြင်းဖြစ်တာတွေ ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။
အဲဒါတွေဟာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက သွေးထဲက ဓါတုပစ္စည်းများ ဟန်ချက်ပျက်ယွင်းတာ၊ ဟိုမုန်းထွက်ရှိမှု့များ ဖေါက်ပြန်တာကြောင့် ဖြစ်တာတွေလို့ …
ဒါကြောင့်ပဲ ဗီဇချွတ်ယွင်းတဲ့ ကလေးများ မွေးလာတာလို့ … ကြားဘူးပါတယ်။
ဘီလူးလို့ လူတွေပြောတဲ့ မျက်လုံးအလွန်ကြီး ၊ မျက်ခွံမစိလို့ မျက်လုံးပြူးနေသလိုဖြစ်ပြီး အောက်မေးရိုးတိုဝင်နေပြီး မျက်နှာမှာ အမွေးတွေပေါက်နေတဲ့ကလေးတော့ ကိုယ်တိုင်တွေ့ဘူးပါတယ်။ သတ်စရာမလိုပါဘူး၊ အသေမွေးတာပါ ၊ သို့မဟုတ်မွေးပြီးမကြာခင်သေတာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
မိဘတွေကတော့ ဟိုပြောသည်ပြောနဲ့ နားယောင်ပြီး ဟိုဟိုသည်သည်အစီအရင်တွေနဲ့ မြှုပ်လိုက်တာပါပဲ။
အဲ့ဒီခေတ်က ဗဟုသုတနည်းပါးလို့ မျိုးရိုးဗီဇဖောက်ပြန်တဲ့ ကလေးမွေးတယ်ထားဦး… ဘာလို့ လုပ်ကြံဇာတ်လမ်းတွေ လျှောက်ပြောရပါလိမ့်… ဓါးနဲ့ ခုတ်တာ ပြန်ဆက်တယ်တို့ …. အမေက အသားစိမ်းစားချင်တယ်တို့ … ယောကျာ်းအသားကို မွေးတယ်ပြောတာတို့ဆိုတာ တကယ့်ဇာတ်လမ်း မဖြစ် နိုင်ဘူး ။
ကြောက်စရာတော့ ကောင်းတယ်နော် ။ အခုမှ အဲလို အဖြစ်အပျက်ရှိတယ် ဆိုတာ ကြားဖူးတာပါ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့လေးတွေက မွေးကင်းစကလေးလေးတွေပဲ လေ ….. သနားတော့လည်း သနားပါတယ်။ ကြီးလာလို့ ပြသာနာ ဖြစ်မယ် မဖြစ်ဘူးတော့လည်း သေချာ မသိပေမဲ့ …. နည်းနည်းတော့ ရက်စက်သလားလို့ ။
တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာဆိုရင် ဘီလူးလေးတွေက အသက်ရှင်တယ်လို့ ယူဆရမှာပေါ့နော် ကြောက်စရာတော့ ကောင်းတယ်ဗျာ .. ငယ်ငယ်ကတော့ လူကြီးတွေ ပြောတာ ကြားဖူးတာပဲ ရှိတယ် .. ဘီလူးမွေးရင် အဲ့ဒီဘီလူးက လေတိုးတိုင်းကြီးတာတဲ့ .. ဟုတ်မဟုတ်သေချာ မသိပါဘူး ဒါပေမဲ့ ဘီလူးဆိုရင်တော့ ကြောက်တယ်ဗျာ .. ငယ်ငယ်က နယ်ဘက်မှာ ကြားမိသေးတယ် အံပွား တဲ့ တော်တော်သောင်းကျန်းတယ်ဆိုပဲဗျ ကျည်ဆံတောင်မတိုးဘူးလို့ ပြောကြတာ .. ခုတော့လည်း သိပ်ပြီး ထူးဆန်းတာ မရှိသလိုပါပဲဗျာ … ဒီပို့စ်အကြောင်းဟာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလို့ ကျေးဇူပါဗျာ..
ဘီလူးဆို ရွာတွင်းရွာပြင် ဘယ်ဘီလူးမှ အရှင်မထားနဲ့၊ အကုန်ရှင်းပစ်..။ :mad:
အဇာတသတ်တောင် သွေးပဲဖောက်တာ သူကအသားကိုချင်ခြင်းတပ်တာဆိုတော့နော်
ငယ်ငယ်တုန်းက ယုံတန်းစကားလိုလို ပြုံပင်လိုလို ကြားဖူးတယ်။ ကောင်းကောင်းမမှတ်မိတော့ဘူး။ လူသားစားတဲ့ဦးလာဘ တုန်းကလည်း တော်တော် စွမ်းတယ်ကြားရတယ်။ သူသာရှိသေးရင် သူကြီးနဲ့ တွေ့ပေးပြီး မီလီယံ ဘစ်စနစ် လုပ်လိုက်ရင် တချီတည်း ထောပြီ။
ဘီလူးလေးမွေးလာရင်တဲ့ ကလေးကို တစ်ခါတည်း ဂုတ်ချိုးပြီးသတ်ပစ်ရတယ်တဲ့ … သရက်မှာလည်း အဲ့လိုလေးမွေးလို့ သတ်ပစ်လိုက်တာလေ လေတိုက်လေကြီးလာလေလေဆိုလား တော်တော်တော့ကြာပါပြီ
အွန်လိုင်းမှာ ဟိုရှာဒီရှာ ရှာရင်းနဲ့
ဒါလေး ပြန်တွေ့မိလို့ နည်းနည်း အက်ဒစ်လုပ်လိုက်တယ် …
မဖတ်ဖူးသူတွေလည်း ဖတ်ပြီးတော့ မယုံကြောင်း ပြောကြဦးပေါ့ဗျာ …
အတည်ထပ်ပြောရရင် … ရွာက တကယ့်အဖြစ် ဖြစ်ပါကြောင်း ….။
နောက်ထပ်လည်း မွေးလာတာ ရှိပါသေးတယ်။
တစ်ယောက်တည်း ပေါ့ဗျာ … (မျိုးဗီဇ ဖောက်ပြန်တယ် ပြောရလေမလား မသိဘူး)
လူခြောက်လေးတွေလည်း မွေးသေးဗျ …
ဒီိပိုစ့်ကိုကြည့်လိုက်ရတာ မဟာရာဇာကြီး ရွာ့သက်တမ်းအတော်ရင့်ပြီဆိုတာ မှတ်တမ်းတင်လိုက်သလိုပဲ။
မဖြစ်နိုင် ဖြစ်နိုင်ဆိုတာကတော့ …မကြုံဘူးရင် မသိနိုင် မယုံနိုင်ကြတာ လူ့ သဘာဝလေ…
မျိုးရိုးဗီဇ ဖောက်ပြန်မှု အစကတော့ စန္ဒမုခိ ဘီလူးမ က စပြီးပြောရမလားဘဲ..ဟို…၀ိဇယ မင်းသားနဲ့ ပါတ်သက်ခဲ့တဲ့..အမျိုးသမီးလေ။